Features - ukubona indlela njengamaza ROM Lixesha kakhulu
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Features - ukubona indlela njengamaza ROM Lixesha kakhulu
umatshini pa jackpot ahlulwa kuzo zonke kulawulo ROM. Ukuba Minukere Isigaba elinqatyisiweyo ROM, kungona kungenzeka ukuba givin lo jackpot. Ngoko ke, nokuba kukho inkalo kwisigaba kakuhle ye-ROM, yaye emva koko iinkcukacha ngakumbi ingcaciso yakho.
ROM womelele, imiqondiso lula ukuba ukubetha jackpot iphuma ezahlukeneyo. Ngokukodwa, imveliso kunye ukufikelela, zama ingqalelo hit ngayo. Umzekelo, ukuba ufikeleleko kunye nokusebenza, iindidi zemveliso kunye ukufikelela ziya okanye indawo njalo.
ngamnye uye wayeka nokuba ngaphantsi, okanye ukutshona amanqaku ngamnye ngokuthembekileyo bubushushu obukhulu ingafumaneki. Ukongeza, ubone tsala-emva ukuncitshiswa kwexesha, njalo njalo okanye kukhuthazwe kumjikelo, ndicinga ukuba uza kuba ixesha namandla.
koko, kwixesha elilungileyo, okanye kusenokwenzeka ukuba kwenzeke unxibelelana Chang, naye omnye kwexesha elinqatyisiweyo ukuhamba amathuba ukwahluka uyeza ngokwandileyo ukuya jackpot. Ngokomzekelo, kunokuba ume nje ngenxa yokuba abazange beze zezisebenzi e iiyure zokusebenza ezimfutshane, malunga 200 neziphithiphithi bazama ukudlala ngomonde. phambi kokusebenza ngaphandle kwebhokisi, nani izinto ezifana nokuba ususe hit enkulu
, ndicinga ukuba kukho izinto ozifumanayo. Kulandelwe flow elungileyo, akukho sazo, xa kukho into elolo hlobo kufika hit ayeka kwaoko nganye elandelayo, kukho amathuba ixesha namandla.
ukuma ye ololo hlobo, kuya kuba phezu kwetafile ukuba ndinyuke kunye osemqoka kwexesha olunamandla, ndicinga ukuba abe ngabom idlala itrayi.
Ngoko, kwi pa parlour, kukho oyintsobi yalowo inombolo uphuphu. Le modeli yindlela kakhulu iya kuba ngemfano kokuhluma siye ngokunciphisa ngumthengi. Ngaloo pa evenkileni, ngaba wena okanye ukutshintsha izikhonkwane hlengiso kunye like.
icala pa parlour, ukuba awutshintshi ngelixa inani uphuphu, ndithi yibani iintsuku ezimbalwa emva ixesha meko. Isigaba elinqatyisiweyo ROM kuphela kwento ukuze sibonwe ngokukhawuleza adlale. Ngoko ke, ukuba ukhangela, ingakumbi kule grafu data, kuya kuba lula ukuqonda ngakumbi.
kakhulu ngesisekelo esinamandla lwe data Ngaba ungathanda ukuba ubone ke nokulatyuza inani elipheleleyo ukuvukelwa igrafu yomgca. Ekubeni bamlandela jackpot, zama ukukhetha itafile ngesantya encinane ojikeleza lemini. Kwaye ngaloo, iqonga ezayo nganye 200 ukujikeleza phambi nasemva kokuba elilandelayo kuma encinane eziyobisi, makhe wabeka ithuba nokulatyuza enamandla uzayo entsimini umbono.
emva kwexesha eziqhelekileyo, ngokuqinileyo ukuchonga umda kusini-ubomi, ngoko ke kubalulekile ukuba ayeke kwi ixesha ukuba afumane inzuzo ngaphandle mali eyilahleko.
xa ubomi zesiqhelo, okanye bangxame ukucaphukisa ubomi kufuneka kwaxelwayo, umzekelo, ebhekisele data elidlulileyo. Ngoku, ekubeni kunzima ukujonga kuphela imo itafile udlala, makhe kunye data ukuba enokugqiba iimbono ezimbini.